Millimita Hydraulic Butt Fusion Machines Manufacturers, Suppliers - China Millimita Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Ngwa na Njirimara SUD1200H bụ igwe hydraulic butt fusion. A na-eji ya ịgbanye ọkpọkọ welding na akwa akwa dị ka ikpere, tees, cross, wye na olu flange na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ site na ịhazigharị ihe ndị ahụ. Okwesiri maka ikpo oku plastic na akwa nke eji HDPE, PP, PVDF ihe. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro. Ngwá ọrụ atụmatụ eletriki. Mee ka ihe dị fechaa na ike dị elu; mfe Ọdịdị, obere na ...
Ngwa na SUD450H bụ igwe na-arụ ọrụ hydraulic butt. A na-eji ya ịkụ ọkpọ ọkpọ na akwa dị ka ikpere, tees, obe, wye na olu flange na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ site na ịhazigharị ihe ndị ahụ. Okwesiri maka ikpo oku plastic na akwa nke eji HDPE, PP, PVDF ihe. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro. Ngwá ọrụ atụmatụ eletriki. Mee ka nke fechaa na elu ike ihe onwunwe; mfe Ọdịdị, obere na deli ...
Ngwa na SUD250H bụ igwe na-arụ ọrụ hydraulic butt. A na-eji ya ịkụ ọkpọ ọkpọ na akwa dị ka ikpere, tees, obe, wye na olu flange na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ site na ịhazigharị ihe ndị ahụ. Okwesiri maka ikpo oku plastic na akwa nke eji HDPE, PP, PVDF ihe. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro. Ngwá ọrụ atụmatụ eletriki. Mee ka nke fechaa na elu ike ihe onwunwe; mfe Ọdịdị, obere na ...
SUD200H n'isi Fusion Machine
Ngwa na SUD200H bụ igwe hydraulic butt. A na-eji ya ịkụ ọkpọ ọkpọ na akwa dị ka ikpere, tees, obe, wye na olu flange na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ site na ịhazigharị ihe ndị ahụ. Okwesiri maka ikpo oku plastic na akwa nke eji HDPE, PP, PVDF ihe. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro. Ngwá ọrụ atụmatụ eletriki. Mee ka nke fechaa na elu ike ihe onwunwe; mfe Ọdịdị, obere na deli ...
SUD160H Bututu Fusion Machine
Ngwa na SUD160H bụ igwe na-arụ ọrụ hydraulic butt. A na-eji ya ịgbanye ọkpọkọ welding na akwa akwa dị ka ikpere, tees, cross, wye na olu flange na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ site na ịhazigharị ihe ndị ahụ. Okwesiri maka ikpo oku plastic na akwa nke eji HDPE, PP, PVDF ihe. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro. Ngwá ọrụ atụmatụ eletriki. Mee ka nke fechaa na elu ike ihe onwunwe; mfe Ọdịdị, obere na ...